19 | November | 2007 | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် Archive for November 19th, 2007
မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ကြပြီ
မူရင်းဆောင်းပါး ASEAN leaders meet on Myanmar ဆောင်းပါးရှင် Martin Abbugao
၁၉-၁၁-၂၀၀၇ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)လတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေသူတွကို စစ်အစိုးရက ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီး ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကို အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက ပထမဦးဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ သူ့ရဲ့စစ်အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဟိုကသည်က ချော့လိုက်ခြောက်လိုက် မပေါ်ပေါ်အောင် စကားနှိုက်လိုက်နဲ့ မေးနေတာတွေကို ဖြေရဖို့ ရှိပါတယ်။
စက်တင်ဘာလက ဒီမိုကရေစီ ထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက အနည်းဆုံး (၁၅)ဦး သေဆုံးအောင် နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ အာဆီယံကိုယ်တိုင်မှာလည်း ပိုပြီး ဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို မနက်ဖြန် တရားဝင် မကျင်းပမီ ဒီညမှာတော့ အစောင့်အကြပ် ထူထူထဲထဲ ချပြီး မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန် အပါအ၀င် အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက အလွတ်သဘော ညစာစားပွဲ ကျင်းပပါတယ်။ ညစာစားရင်း စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို ၀ိုင်းဆွေးနွေးကြဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ အခုလို ညစာစားပွဲကြီး မတိုင်မီကပဲ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရ အပေါ် သစ်၊ ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့ သတ္တုအပါအ၀င် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အသစ်တွေ ချမှတ်လိုက် ပြန်ပါပြီ။ မြန်မာ့အရေးကို အာဆီယံ ကိုင်တွယ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာဆီယံအပေါ် အမေရိကန်က ယုံကြည် စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားတွေ ဆုံးရှုံးစရာ ရှိနိုင်တယ်လို့ ဒီနေ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆီယံကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အပြစ်ပေး အရေးယူတာတွေလုပ်ဖို့ တွန့်ဆုတ်နေတုန်းပါပဲ။
“မြန်မာ့အရေးကြောင့် အာဆီယံကို အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အပိုင်းမှာ သံသယ၀င်စရာ ဖြစ်နေရပါပြီ”လို့ စင်္ကာပူ ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ် Susan Schwab က သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“အမေရိကန်ရဲ့ စိုးရိမ်သောကတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရပဲ ဒီနေရာကို ကျမအနေနဲ့ ရောက်လာစရာ မရှိပါဘူး။ အာဆီယံဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ပုံမှန် အလုပ်သဘောဆက်ဆံရုံ သက်သက်နဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ သဘောပေါက်ပြီလို့ ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်”လို့ သူမက ဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလုပ်တဲ့ ပေါ်လစီဟာ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိပေမယ့် အာဆီယံကတော့ ဆက်လက် ကျင့်သုံးသွားနေဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ညစာစားပွဲ မတိုင်မီမှာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Hassan Wirayuda က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလုပ်တဲ့ ပေါ်လစီဟာ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆီယံကတော့ ဒီပေါ်လစီအတိုင်း ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်မှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့အရေးမှာ အာဆီယံက လုပ်ဆောင်မယ့်မူ ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ကမ္ဘာကသိအောင် မပြသနိုင်ဘူး ဆိုရင် အဆန်းတကြယ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်”လို့ Wirayuda က ပြောဆိုသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီတပါတ်မှာ အာဆီယံရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပဋိဥာဉ် စာချုပ်ကို သေချာပေါက် လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာချုပ်ကို သဘောတူတဲ့ အကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေက ဒီနေ့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ အာဆီယံစာချုပ်သစ်မှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ပေးရဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျက်ကွက်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအပေါ် ဘယ်လို အရေးယူ အပြစ်ပေးမလဲ ဆိုတာကတော့ မပါပါဘူး။
ဒီစာချုပ်ဟာ အာဆီယံကို စည်းမျဉ်းခံ အဖွဲ့အစည်းတခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒေသတွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တခု ပထမဦးဆုံး ထွက်ပေါ်လာဖို့ ဖန်တီးလိုက်တာဆိုပေမယ့်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတာတွေအတွက် အပြစ်ပေးအရေးယူတာ မရှိရင် ဘာမှ အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူးလို့ အာဆီယံ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
“တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံ ပဋိဥာဉ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်ရောက်လာဖို့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ပေးဖို့ ဖိလစ်ပိုင်က မျှော်လင့်ထားပါတယ်”လို့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ Gloria Macapagal-Arroyo က ညစာစားပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။ စစ်အစိုးရက ဖြိုခွဲမှုတွေအပြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ကြိမ်သွားခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဂမ်ဘားရီကို ဘယ်လို တိုးတက်မှုတွေ ရလာသလဲဆိုတာ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ သြစတြေလျ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်နဲ့ တောင်ကိုးရီးယားက ခေါင်းဆောင်တွေကို အကြမ်းဖျဉ်း ရှင်းပြပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ “အခွင့်အရေးရဖို့ တံခါးပေါက်တခုပါပဲ” လို့ ဒီနေ့ထုတ် သတင်းစာ မေးမြန်းခန်းမှာ ဂမ်ဘားရီက ပြောသွားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ဂမ်ဘားရီ တရားဝင် ပြောပြဖို့ စီစဉ်ထားပြီးသား ဖြစ်နေတာကို မြန်မာက ဒီနေ့ ကန့်ကွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သံတမန်တွေကြားမှာ အတောမသတ် ငြင်းကြခုန်ကြ ဖြစ်နေရပါတော့တယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yeo ကတော့ “ဂမ်ဘာရီ ရှင်းပြမယ့်ကိစ္စကိုတော့ ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒေသတွင်း ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဂမ်ဘာရီ လာဖို့ကို စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ အာဆီယံရဲ့အရှေ့အာရှ ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံတွေ မပါဝင်စေပဲ ဒီပွဲ (အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ)ကို မှေးမှိန်အောင် လုပ်ချင်နေကြပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
“တကယ်လို့ ဂမ်ဘားရီက အာဆီယံပွဲမှာ ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုသာ ရှင်းပြတာမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်”လို့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Wirayuda က ထုတ်ပြောပါတယ်။ ဒါကို ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Nitya Pibulssongram ကလည်း သံယောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ စင်္ကာပူမှာ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန် ရှိနေတာကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ အသေးလေးတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တဲ့နေရာနားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ရှားရှားပါးပါး မြင်ရတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ စင်္ကာပူအစိုးရက လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေ အပေါ်မှာ ဥပဒေ တင်းကြပ်ထားတဲ့အပြင် လုံခြုံရေးတွေကိုလည်း အကြီးအကျယ် ချထားတဲ့ကြားက ဆန္ဒပြဖြစ်အောင် ပြသွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသား (၉)ယောက်က အနီရောင်အင်္ကျီတွေ ၀တ်ဆင်ပြီး နာမည်ကြီးOrchard လမ်းတလျှောက် ဥပဒေစက်ကွင်းနဲ့လွတ်အောင် အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီး ချီတက်သွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကမ္ဘာကြီးက မမေ့သေးဘူးဆိုတာ ပြသဖို့ တတ်နိုင်သလောက် ကျနော်တို့ လုပ်ပြချင်ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကို ပါးလိုက်ချင်တာပါပဲ”လို့ National University of Singapore တက္ကသိုလ်က အသက် (၂၂)နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှကျောင်းသား Pia Muzaffar က ပြောပြသွားပါတယ်။ မြန်မာ့အရေးကိစ္စတွေ ပြီးဆုံးသွားရင်တော့ ဒီတပါတ်ထဲမှာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက အာဆီယံ လူဦးရေ သန်းပေါင်း (၅၇၀)နီးပါးအတွက် အာဆီယံ ဘုံဈေးကွက်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်လောက်မှာ ဖန်တီးနိုင်မယ့် စီမံကိန်းကို အတည်ပြုကြပါမယ်။ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကတော့ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ မြန်မာဘာသာပြန်- လွင်အောင်စိုး (၂၀-၁၁-၂၀၀၇)
ASEAN leaders meet on Myanmar By Martin Abbugao
Last updated 10:46pm (Mla time) 11/19/2007
မှတ်ချက် – ဂမ်ဘာရီက အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် သူတွေ့ရှိခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေများကို တရားဝင်ရှင်းပြရန် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်ဟု မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Syed Hamid Albar က ပြောသည်။ မြန်မာဘက်က သူတို့သည် ကုလသမဂ္ဂနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စသည် သူတို့၏ပြည်တွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်ကြောင်း (၁၉-၁၁-၂၀၀၇) ညနေပိုင်းက ကန့်ကွက်လာသောကြောင့် အာဆီယံ၏ အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် အခြေခံ၍ အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသည်ဟု Syed Hamid Albar က ရှင်းပြသွားသည်။ Written by Lwin Aung Soe November 19, 2007 at 7:42 pm
Posted in ဆောင်းပါး, မြန်မာ ဘာသာပြန်
ထိန်းသိမ်းခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစိုးရဧည့်ဂေဟာသို့ ခေါ်ဆောင်
၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ (ရိုက်တာ- ယူကေ)
အကျယ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းခံနေရသော အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အစောင့်အကြပ် ထူထပ်စွာ ချထားသော သူမ၏နေအိမ်မှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရဧည့်ဂေဟာသို့ ပြင်ပမှ မမြင်နိုင်အောင် အလုံပိတ်ထားသည့်ကားဖြင့် ယနေ့ ခေါ်ထုတ်သွားပြီး တနာရီခန့်အကြာတွင် ပြန်ပို့ပေးခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေများနှင့် အတိုက်အခံတို့ဘက်မှ ပြောဆိုလိုက်ပြီး စစ်အစိုးရ၏ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရန် ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရဘက်မှ သတင်းထုတ်ပြန်မှုမရှိဟုလည်း သိရသည်။ “ဒီနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံတဲ့ အကြောင်း ကျနော်တို့ ကြားလိုက်ရပါတယ်” ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပြသည်။ ပြီးခဲ့သောလများအတွင်း လူထုဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကို စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲနှိမ်နှင်းခဲ့သဖြင့် အနည်းဆုံး လူ (၁၅)ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ အနောက်နိုင်ငံမှ သံတမန်များကမူ ထို့ထက်မက ပိုမို သေဆုံးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူများကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲနေချိန်တွင် စစ်အစိုးရက ဦးအောင်ကြည်အား ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့ရာ ယခုတွေ့ဆုံမှုသည် တတိယအကြိမ် ဖြစ်သည်။
ယခုတကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသော အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ရှုံ့ချဝေဖန်မှုများကို လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် အချိန်ကိုက် ပေးတွေ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် ဟု လေ့လာသုံးသပ်သူတို့က ပြောနေကြသည်။
မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်မှာ ကျန် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေကို ယနေ့ ပြန်ပြောပြရန် ရှိနေသည်။ ဤသည်မှာ စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ နှိမ်နှင်းပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တရားဝင်ပြောဆိုချက် ဖြစ်သည်။
“ဒါကတော့ အာဆီယံအစည်းအဝေးတက်နေတဲ့ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကို မျက်နှာ မပျက်စေရအောင် လုပ် ပေးလိုက်တာလို့ပဲ ကျနော်ထင်တယ်”ဟု ရန်ကုန်ရှိ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးက ပြောဆိုလိုက်သည်။
လွန်ခဲ့သော (၁၈)နှစ်အတွင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် (၁၂)နှစ်ကြာအောင် ထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမအနေဖြင့် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် အပြုသဘော ဆောင်သည့် ပြောဆိုမှုများရှိကြောင်း၊ ပိုမိုသင့်လျော်မည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ တည်ဆောက်နိုင်ရန် စစ်အစိုးရနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် အသင့်ရှိသည်ဟု ပြောကြားထားသည်။
စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှာ နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှု ရှိသည်ဟု သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပြစ်ဒဏ်ခတ်ထားသည် များအပါအ၀င် ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သဘောတူလျှင် တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ကမ်းလှမ်းထားသည်။ သို့သော် ဒီမိုကရေစီသို့ နိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်းမှုရန် တခုတည်းသော လမ်းကြောင်းမှာ စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံသာ ဖြစ်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများသည် အဆိုပါ လမ်းပြမြေပုံအတွင်းမှာသာ ဖြစ်ရမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက နိုင်ငံပိုင် သတင်းမီဒီယာများသို့ စနေနေ့က ပြောခဲ့သည်။ လက်ရှိစစ်အစိုးရ ၏ လမ်းပြမြေပုံမှာ (၄၅)နှစ် သက်တမ်းရှိနေသည့် စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးကို တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်၍ ယင်းကို အနောက်နိုင်ငံ အစိုးရများက ပယ်ချထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ လမ်းပြမြေပုံအရ ရေးဆွဲသည့် အခြေခံဥပဒေတွင် စစ်တပ်အကြီးအကဲသည် အာဏာ အကြီးမားဆုံး (သမ္မတ) ဖြစ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို စိတ်ကြိုက်ခန့်ထားပိုင်ခွင့် ရှိနေရုံမက အရေးပေါ် အခြေအနေဟု သမ္မတက ယူဆလျှင် ထိုအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်လည်း ရှိနေသည်။ အောင်လှထွန်း သတင်းပို့ပြီး Darren Schuettle ရေးကာ Roger Crabb တည်းဖြတ်သည့် Myanmar’s detained Suu Kyi taken to state guesthouse ဆောင်းပါးကို မြန်မာပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Written by Lwin Aung Soe November 19, 2007 at 2:06 pm
SAPA: Analysis of the ASEAN Charter
The Solidarity for Asian Peoples’ Advocacies (SAPA) is an open platform for consultation, cooperation and coordination among and between Asian social movements and civil society organizations including NGOs, people organizations and trade unions who are engaged in action, advocacy and lobbying at the level of inter-governmental processes and organizations. The SAPA WG-ASEAN isacommon platform for collective action on ASEAN advocacy. http://www.singaporedemocrat.org/articleaseanrightsbody15.html Written by Lwin Aung Soe November 19, 2007 at 6:34 am
Tagged with ASEAN charter, SAPA, Singapore Democratic Party	Human Rights Now!
Human Rights Now! 18 November, 2007
As ASEAN opened its 13th Summit at the Shangri La, about 130 people attendedaforum organized by Sg Human Rights held atalocal hotel this afternoon. Most attendees wore red to demonstrate solidarity with the people of Burma. The organizers had anticipatedalarger turnout, especially from the Burmese nationals. However, some Burmese attendees reported that the police had earlier approached them to dissuade them from attending the forum, and even offered themapaid party at Sentosa as an alternative.
One of the purposes of the forum is to gather signatures for two petitions, which will be delivered afterward, via the ASEAN Secretariat, to the Singapore and Burma member states respectively.The first petition called on the Singapore Government, among other things, to respect the rights of Singaporeans, and to sign and ratify the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The other, in the form ofagiant greeting card with the image of Ms Aung Sung Suu Kyi, allowed signatories to scribble messages as they pleased.
This is an excerpt from the source
Written by Lwin Aung Soe November 19, 2007 at 6:23 am
Tagged with Burma, Human rights, Singapore Democratic Party	World Focus on Burma (19-11-2007)
Bangkok Post, Thailand - By KYAW ZWA MOE Believe it or not, pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has prolonged the lifespan of Burma’s repressive junta. …
Bangkok Post, Thailand -
Electric New Paper, Singapore - … when Burma finally achieves democracy, foreigners who come to Burma will also show respect for our country,’ he said. Another Myanmar national, mrkyaw …
TODAYonline, Singapore - In her speech, Ms Ng reiterated: “My own view is that it (Asean) should not be slow to take Myanmar to task, including suspending it, if its military rulers …
Reuters - “We want to say that the world is still watching and has not forgotten about Burma,” Muzaffar said. Continued…
Electric New Paper, Singapore - Nothing has done more in recent months to giveasense of relevance to Asean among ordinary Singaporeans than the situation in Myanmar, Mr Yeo pointed out. …
Hindu, India - SINGAPORE: China on Sunday threw its weight behind the Association of South East Asian Nations (ASEAN) by taking the line that the Myanmar crisis be …
AHN - … Asian countries (ASEAN) on Sunday has refused to accept the US Senate’s resolution for suspending Myanmar (also called Burma) from the regional group. …
Inquirer.net, Philippines - … Minister Thein Sein of Burma (Myanmar) — two leaders whose governments have come under international scrutiny over allegations of human rights abuses. …
South China Morning Post (subscription), Hong Kong - Western nations are pressuring the leaders to impose sanctions on the nation’s military rulers or throw Myanmar out of the 10-member Association of …
International Herald Tribune, France - … Asian nation once known as Burma. A glimmer of hope for democracy in Myanmar has been raised by the recent efforts of UN envoy Ibrahim Gambari, ..
ABS CBN News, Philippines - … time as the government of Burma has demonstrated improved respect for and commitment to human rights.” Myanmar has been under military rule since 1962. …
Financial Times (subscription), UK - But many suspect the real rationale is to shield Burma’s military rulers, including Thein Sein, the prime minister, from the public gaze. …
Xinhua, China - The series of statements of the peace groups and militia, carried in the state-run newspaper New Light of Myanmar in the last two days, include those of …
Bloomberg - … effort to bring about change in the Southeast Asian country formerly known as Burma. China will say it “is in favor of democratic change in Myanmar, …
Channel News Asia, Singapore - SINGAPORE – Myanmar will this week signanew charter for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which commits members to promote human rights …
AFP - However, democracy activists have rejected it as inadequate because it does not includeamechanism to suspend or eject Myanmar from the grouping despite …
Jakarta Post, Indonesia - President Yudhoyono also needs to personally tell Myanmar’s new prime minister, Lt. Gen. Thein Sein, who will also attendaregional summit, to convey the …
Khaleej Times, United Arab Emirates - SINGAPORE – UN special envoy Ibrahim Gambari sees “a window of opportunity” in Myanmar and hopes to return to the country before year’s end, …
Khaleej Times, United Arab Emirates - SINGAPORE – Myanmar’s Prime Minister Thein Sein, in Singapore for the ASEAN summit, would not be too welcome at Peninsula Plaza, the hub for the …
Earthtimes, UK - Despite the international uproar over the crackdown, ASEAN has rejected calls to suspend Myanmar until the crisis is resolved. The Free Burma Coalition, …
Wall Street Journal - If these recommendations are adopted, Asean’s commitment to reform will immediately be tested by how it will deal with Myanmar’s generals. ..
ReliefWeb (press release), Switzerland - The humanitarian crisis in Burma (Myanmar) is worsening. Poverty in some regions has reached critical levels, with severe food insecurity and many landless …
Monsters and Critics.com, UK - ‘We also hope that more people will come out and show solidarity with Burma.’ Myanmar has become the focus of protests worldwide afteraviolent crackdown …
International Herald Tribune, France - … first led the peaceful demonstrations against the fuel hikes and inflation that were pummeling the impoverished people of Myanmar, also known as Burma. …
Bloomberg - 19 (Bloomberg) — A planned protest in Singapore against Asian leaders’ “tacit” approval of Myanmar’s fatal crackdown on demonstrations fizzled today when …
Washington Times, DC - Following an Asian path is likely to beamore effective way of promoting positive change in Burma. The military regime that came to power in Burma/Myanmar …
PR-Inside.com (Pressemitteilung), Austria - … ASEAN has been called into question because of the situation in Burma … It just can’t be business as usual,» she said. Myanmar is also known as Burma.
Indianapolis Star, United States - Earlier this month, two leading United Nations officials seeking to bring peace and stability to Myanmar (formerly Burma) and Sudan incurred the wrath of …
Merinews, India - Things went well for New Delhi until the sudden uprising in adjoining Burma (also known as Myanmar). While New Delhi invited critical comments from …
Elmira Star-Gazette, NY - In Myanmar (formerly known as Burma),asmall country in South Asia, civilians calling for democracy have suffered similar consequences. …
AFP - … to push Myanmar’s generals towards democracy, but so far it has been reluctant to take any punitive action against the nation formerly known as Burma. …
Aljazeera.net, Qatar - Leaders from the Association of South-East Asian Nations are facing renewed pressure to take action against Myanmar as they gather for an annual summit in …
Bloomberg - Myanmar isamember of Asean, which has rebuffed calls for sanctions against the military-ruled country, formerly known as Burma. …
Jakarta Post, Indonesia - SINGAPORE (AP): Myanmar gave its full backing Monday toalandmark Southeast Asian charter that will create an agency to review the region’s human rights …
BBC News, UK - “If you make all these fierce statements and supposing we say we expel Myanmar [Burma] from Asean, what difference does it make?” Mr Lee told the BBC. …
Viet Nam News, Vietnam - The latter is all the more imperative following the sad events in Myanmar. The EU hasastrong interest that Burma/Myanmar develops intoademocratic and …
Bangkok Post, Thailand - Singapore – The Association of Southeast Asian Nations expects Burma to comply withalandmark charter after the military-ruled country made no objections …
The Associated Press - The military has ruled Myanmar, also known as Burma, since 1962, crushing periodic rounds of dissent. It held elections in 1990 but refused to hand over …
Reuters UK, UK - Myanmar Prime Minister Thein Sein was due later on Monday to brief his counterparts on events in the former Burma for the first time since the crackdown. …
ABC Online, Australia - There are reports that Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi has been taken from the Rangoon villa where she has been held for the past four years toa…
JURIST - ASEAN is facing criticism for allowing military-ruled Myanmar to sign the Charter, butasplit such as described might save face by allowing Myanmar to …
Monsters and Critics.com, UK - ‘The EU looks forward to Mr Gambari’s return and reiterates its call on the government of Burma/Myanmar to afford him all possible assistance, …
Bloomberg - “Asean has special responsibility when it comes to the situation in Burma,” US Trade Representative Susan Schwab said today in Singapore. …
Khaleej Times, United Arab Emirates - … and opponents led by pro-democracy leader Aung San Suu Kyi. ‘I cannot specifically predict what they will discuss but in recent meetings with Myanmar, …
PR-Inside.com (Pressemitteilung), Austria - Myanmar objected to the briefing and other ASEAN countries, except Singapore, supported Myanmar,asenior Malaysian official told Malaysian journalists. …
International Herald Tribune, France - “The reputation and credibility of Asean as an organization has been called into question because of the situation in Burma.” Many analysts predict that …
BusinessWeek - … deal done,” said US Trade Representative Susan Schwab on the sidelines of the annual summit of the Association of Southeast Asian Nations in Singapore. …
Voice of America - Ambassador Schwab told VOA that ASEAN has, in her words,aspecial responsibility when it comes to Burma. “I think the key is business as usual just doesn’t …
The Associated Press - The US and other nations have strongly criticized ASEAN for its relatively conciliatory approach toward the junta controlling Myanmar,abloc member that …
Pravda, Russia - Unless Myanmar restores democracy and frees Aung San Suu Kyi, opposition leader, it is unlikely to ratifyalandmark Southeast Asian charter, …
ABCmoney.co.uk, UK - By : Agencies SINGAPORE (Thomson Financial) – Southeast Asian leaders have called offabriefing by UN envoy Ibrahim Gambari on the situation in Myanmar …
Inquirer.net, Philippines - The extrajudicial killings here and the slaying of pro-democracy protesters in Burma (Myanmar) have roused virulent reactions. …
PR-Inside.com (Pressemitteilung), Austria - It isadifficult problem for Myanmar,» Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, the chairman of ASEAN, told reporters, after reading out the statement. …
Reuters AlertNet, UK - These entities include the Burmese government’s Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE),astate company under the Ministry of Energy whose earnings benefit …
Reuters - SINGAPORE (Reuters) – Southeast Asian nations said on Monday that Myanmar should work with the United Nations on democracy and release political detainees, …
Monsters and Critics.com, UK - Singapore – The Association of South-East Asian Nations (ASEAN) on Monday abruptly called offascheduled address by UN special envoy Ibrahim Gambari ata…
UN News Centre - 19 November 2007 – As the countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) get set to discussaplan for greater regional integration at …
Mizzima.com, India - While Burmese mobile phones (operated by the Myanmar Post and Telecommunication) cost about 3000000 kyat the Chinese mobile phones cost about 100000 kyats. …
Guardian Unlimited, UK - By Neil Chatterjee SINGAPORE, Nov 19 (Reuters) – Southeast Asian nations called on Myanmar on Monday to move towards democracy after facing criticism and …
Channel News Asia, Singapore - By Valarie Tan, Channel newsasia | Posted: 20 November 2007 0247 hrs SINGAPORE : ASEAN leaders have agreed to let Myanmar deal with the United Nations on …
Written by Lwin Aung Soe November 19, 2007 at 5:52 am
Tagged with ASEAN, Aung San Suu Kyi, Burma, China, Democracy, Doha, EU, Fukuda, Human rights, India, Japan, monk, Myanmar, Nagai Kenji, Protest, Reconciliation, Sanctions, Singapore, Stability, Students, Thein Sein, Tiananmen Square, Trade, UN, UNSC, US	VOA Burmese (19-11-2007)
Written by Lwin Aung Soe November 19, 2007 at 4:49 am
Tagged with VOA Burmese	Recent Posts (Save Burma – new site)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနေ့တခြား သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းလာနေ November 22, 2011ရပ်/ကျေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ဥပဒေ မရှိသင့် November 22, 2011ကျုံးကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် ဆင် November 12, 2011ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ November 7, 2011အစိုးရဆိုတာ လွှတ်တော်ကို အခြေခံထားရတာဖြစ်လို့ ဘာလုပ်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲ လုပ်ပါ။ October 18, 2011ကမ္ဘာ့လူရမ်းကားကြီး တရုတ်ရဲ့ ၂၁ ရာစု ကျုးကျော်နယ်ချဲ့ရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပထမ ပစ်မှတ်က မြန်မာပြည် October 4, 2011မတရားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အနုတ်လက္ခဏာ October 2, 2011ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒပြခြင်းသည် မဆန်းပါ။ September 26, 2011ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား September 15, 2011မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား September 15, 2011Top Postsဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံကို မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြ
Irrawaddy / Khit Pyaing: website URL for temporary use ဂြိုဟ်တု စလောင်း ရုပ်သံကြေး မိုးပေါ် ပျံတက်သွား Burma's online videos
ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး (သို့) ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေကို အံ့အားသင့်သွားစေတဲ့ မြန်မာ အချစ်ကဗျာ တပုဒ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် အထူးခြားဆုံး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမား
Mizzima (Burmese)ပြည်ထောင်စုအဆင့် တက်နိုင်ရန် အပစ်ရပ် ခိုင်မာဖို့လိုဟု KNU ပြော August 6, 2012အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအားကစားသမားများ ရလဒ်များ မကောင်း August 4, 2012ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်ပြန် August 20, 2011ICC အမြန်ရောက်လိုသူ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဦးထူးထူးဟန် July 20, 2011နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၆ ဦး လွတ် May 17, 2011ပုဂံလက်ဆော့ March 1, 2011အင်းစိန်ဗုံး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ February 28, 2011မြသန်းတင့် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၃ နှစ်ပြည့် February 23, 2011 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)ဖားကန့်မှာ ကျောက်စိမ်းတွင်းပြို ၃ ဦး သေဆုံးမောင်တောမှာ မွတ်စလင် လူဦးရေ တိုးပွားမှုနှုန်း ထိန်းချုပ်မိန့် ထုတ်ပြန်မိတ္ထီလာ အရေးပေါ် ကာလ နောက်ထပ် နှစ်လတိုးမိတ္ထီလာမှာ သံဃာတော် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ၇ ဦးကို ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု အမေရိကန်သမ္မတ ချီးကျူးမြန်မာ့အပြောင်းအလဲ အိုဘားမား ကြိုဆို၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ သတိပေး Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)Burma ‘more free’ than China, says US think-tank January 17, 2013Earthquake rescue teams struggle to cope November 13, 2012PepsiCo opening bottling plant in Burma November 13, 2012Doctors without Borders face barriers November 12, 20126.8-magnitude earthquake rocks northern Burma, 12 dead November 12, 2012Obama visit should firm up US policy on Asia November 12, 2012Talks with Burmese gov’t ‘fruitful’: ABSDF November 12, 2012Whether to follow Thailand’s lead November 12, 2012 BBC (Burmese)ဘုနျးကွီး သတျမှုနဲ့ ၇ ယောကျ ကို ထောငျခသြမ်မတရဲ့ တပျရာခိုငျနှုနျး သဘောထားအပျေါ ဝဖေနျလဆေငျနှာမောငျး ဝငျမှတေဲ့ နရောမှာ ကယျဆယျရေးတှေ ဆကျလုပျနေ RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldArwa Damon: Freeze-frame moments March 22, 2013It was the war everyone just wanted to forget. But fromatiny red shoe in the rubble toaresident who rebelled against al Qaeda, CNN's Arwa Damon remembers the many freeze-frame moments caused by war.Jessica Lynch, others: Where are they now? April 16, 2013Ten years ago this week, President George W. Bush announced the United States and coalition forces had begun military action against Iraq. Here'salook back at some of the people who made headlines during the war.Photos: Enduring images March 19, 2013Troubled youth run 'old skool' bistro May 17, 2013Asajuvenile corrections officer in Southern California, Teresa Goines found it rewarding to work with troubled youth and help them turn their lives around.Pregnant and homeless: The real cost May 9, 2013Martha Ryan couldn't believe it. She had never heard of women who were pregnant and homeless. But in one night, she met three.Grieving dad helps kids get to chemo May 2, 2013For many children fighting cancer, it can be extremely tough to make it to their chemotherapy appointments.You won't believe what's in U.S. rivers April 18, 2013In the last 15 years, Chad Pregracke has helped pull more than 67,000 tires from the Mississippi River and other waterways across the United States. But that's just scratching the surface.'Brilliant Bus' shrinking digital divide April 5, 2013Working asaguidance counselor five years ago in Palm Beach County, Estella Pyfrom noticed that fewer students had access toacomputer after school. IPS Top newsMigrant Workers Face Tough Times in Thailand May 21, 2013Small and Large Steps towards Equality for Gays in Cuba May 20, 2013Myanmar’s President Makes Historic, Divisive Visit to White House May 20, 2013Brazil Lagging in Fight against Human Trafficking May 20, 2013When It Comes to Syria, Israel Frequently Redrawing Red Lines May 20, 2013Living in Hell, Iraqi Christians Dream of Paradise May 20, 2013Environmentalists See Seeds as Key to Agricultural Reform May 20, 2013Wave of Protests Against Malaysian Election Results May 20, 2013Meta	Register	Log in